Ukuphupha ngengalo ephezulu Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Phupha ngentla Ukusuka engalweni
Sihlala sidibana amandla umsipha ngengalo ephezulu. Oku kunjalo ngakumbi kumadoda, kodwa abasetyhini bayomeleza ii-biceps zabo kunye neetriceps kwezi ntsuku. Izicubu ezingalweni yakho ephezulu zihlala zikhululekile ukuba awenzi mithambo rhoqo. Iingubo ezingenamikhono kunye neeblawuzi zinestayile ehlotyeni, kodwa zikhangeleka kuphela xa iingalo ezingaphezulu zibonakala. Ukuba imbonakalo ebonakalayo ibalulekile ikakhulu kwabasetyhini, ingalo yemisipha yendoda ayithethi kuphela umtsalane, kodwa namandla omzimba nawengqondo, kunye nempumelelo kunye nokhuseleko.
Ukuba ingalo ephezulu idlala indima ekulaleni, ubuthongo bunokonwabela i-aesthetics yelungu lomzimba elenziwe kakuhle. Mhlawumbi uphupha ngokubukela umntu esenza umthambo okanye ephakamisa iintsimbi. Ukutolikwa kwamaphupha, kubalulekile ukuba ubume buphi ubume bengalo ephezulu nokuba ujongeka kanjani. Ngaba yomelele okanye ibhityile? Ngaba liphupha lakho okanye lelomnye umntu?
1 Uphawu lwephupha «ingalo ephezulu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ingalo ephezulu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ingalo ephezulu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ingalo ephezulu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwamaphupha, ilungu ngalinye lomzimba linentsingiselo ethe ngqo. Isimboli yephupha "ingalo ephezulu" inxulumene ngokusondeleyo nesandla kwaye, ngengqondo ebanzi, ibhekisa kwisakhono sokwenza. Ingalo ephezulu ehlala ngokukhuselekileyo okanye ngokukhululekileyo emagxeni omntu inexinzelelo uthando ngaphandle. Ukusondelana ngokwasemzimbeni ephupheni kufanekisela ukubopha kwangaphakathi phakathi kwabantu ababini.
Kubalulekile ekutolikeni amaphupha, yeyiphi indima edlalwa kukuphupha ngokwakho ephupheni lakho. Ukuba ingalo ephezulu yeyakho, uphawu lwephupha lubonisa ukuba uphupha i Amandla kwaye unomdla wokukhathalela umntu omthandayo. Ukuba ngomnye umntu othatha iphupha ngengalo, ingalo ephezulu kutoliko lwephupha luphawu lomnqweno wokukhuselwa.
Kwitoliki ethandwayo yamaphupha, uphawu lwephupha lumele amandla eshishini kunye nempumelelo, ukuba nje yingalo eyomeleleyo. Ukuba ubona ingalo yakho yemisipha ephupheni, ibonisa ukusebenza nzima, kodwa nakwi Amandla kunye nempilo. Ingalo engenanto engenanto, ngakumbi, ithembisa ukuzuza ngezinto eziphathekayo. I-bicep encinci, kwelinye icala, ilumkisa ngentlupheko ezayo. Ingalo eyaphukileyo luphawu lwephupha lobubi kunye nengozi, enokuthi iphazamise ukulala kwakho kunye nosapho.
Uphawu lwephupha «ingalo ephezulu» - ukutolikwa kwengqondo
Kwi "ingalo ephezulu" isimboli yamaphupha amathuba Okufunwa nguwe. Ngengalo unokumila kwaye utshintshe imeko-bume yakho, wenze into, kodwa uyitshabalalise.
Ukuba ingalo ephezulu isetyenziswa ephupheni isenzo sokukhusela, ukutolikwa kwephupha kuveza isidingo sephupha lokuziva ukhuselekile kwaye ukhathalelwe ngumama kwakhona njengomntwana. Kwelinye icala, ethile Charakterzug ibonisa iphupha kwisimboli sephupha. Ngokunokwenzeka umphuphi ngokwakhe unethuku elibhengeziweyo lokukhusela.
Ngenxa yoko, ukukhubazeka kwengalo ephezulu xa ulele luphawu lokuba ukulala uziva uthintelwe ekusebenzeni kwayo. Ephupheni, imiqondiso yakho ye-subconscious yeebhloko esele zikhona kunye nokuthintela.
Uloyiko lokulala olungazi nto lunokubonakaliswa kwisimboli sephupha "ingalo ephezulu", kuba ingalo eyomeleleyo inokunxulunyaniswa nobundlobongela. Ungabetha okanye ucinezele abanye ngayo. Ukulala kunokuba ngumqondiso okrwada. Amava obundlobongela kuba. Kwelinye icala, unokuzikhusela kwizithonga zeengalo zakho okanye ungazisebenzisa ukuzikhusela. Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha "ingalo ephezulu" inokuba sisicelo sokwahlukana nendima yexhoba.
Uphawu lwephupha «ingalo ephezulu» - ukutolika kokomoya
Iingalo azisebenzi nje kuphela, ziyabonelela Amathuba okubonisaukwenza umqondiso nabo, umzekelo. Kwinqanaba lokomoya, uphawu lwephupha "ingalo" livakalisa iimvakalelo neengcinga zephupha.